सङ्घीयता भनेकै खर्चिलो व्यवस्था हो | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश-सुदूरपश्चिम सङ्घीयता भनेकै खर्चिलो व्यवस्था हो
झपटबहादुर बोहरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश नं ७
प्रदेश नं ७ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको रूपमा झपटबहादुर बोहराले नेतृत्व गरिरहेका छन् । व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्र अछाम–१ बाट प्रदेशसभा सांसदको रूपमा निर्वाचित बोहरा पहिलोपटक प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका हुन् । समग्र प्रदेश विकासको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका वीरेन्द्र भट्टले मन्त्री बोहरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेशको अर्थमन्त्रीको हैसियतले ७ नम्बर प्रदेशको विकास गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुभएको छ ?
प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश भनेकै ७ नम्बर प्रदेश हो । यसको उजारमा हामी आफै लागिपर्नुपर्छ । हिजोसम्म यो प्रदेशलाई काठमाडौं सिंहदरबारबाट हेरिन्थ्यो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ । केन्द्र सरकारका विभिन्न अधिकार प्रदेश सरकारमा आइसकेकाले प्रदेशका सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । अधिकारको बाँडफाँट भइसकेकाले अब प्रदेशको विकास गर्न त्यति समस्या म देख्दिनँ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जडीबुटीलगायतबाट प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउन सकिन्छ ।
अहिले प्रदेश विकासको चक्र ठ्याक्कै कुन बिन्दुमा पुगेको पाउनुभएको छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैङ्क तथा विश्व बैङ्क र राष्ट्र बैङ्कले पनि ठ्याक्कै विकासको चक्र कुन अवस्थामा छ भन्ने तथ्याङ्क राखेको पाइँदैन । त्यसकारण हामी विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौं । विकासका विन्दुहरू पनि प्रारम्भिक चरणमा नै छन् । मध्यम गतिबाट माथि उठाएर उच्चतम आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौं । यसका लागि लगानीयोग्य वातावरण, लगानीका उच्चतम स्रोतका लागि गुरुयोजना आवश्यक देखिन्छ ।
३ महीनाका लागि पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको बजेटको सार्थकता देखिएन भन्ने जनगुनासो छ नि ?
हामीले त्यो बजेट विकासका लागि प्रस्तुत गरेका नै थिएनौं । अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानमा आधारित बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसकारण विकासका खाका तथा बाटाहरूमा त्यो बजेटले खासै अर्थ राख्दैन । हामीले जुन प्रकारको बजेट प्रस्तुतको परिकल्पना गरेका थियौं, त्यसमा हामी सफल भएका छौं । कतिपय कार्यक्रमहरू पूँजीगततर्फ खर्च हुन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले आवश्यक संयन्त्र उपलब्ध नगराएका कारण हामीलाई समस्या परेको हो । अब केन्द्र सरकारले मानव संसाधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै छ । त्यसले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
यहाँले गरेको प्रदेश विकासको परिकल्पना के हो ?
एकै वर्षको बजेटले विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । पच्चवर्षीय, दशवर्षीय योजनाहरू आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रस्तुत बजेट त १ वर्षको आय र व्ययको विवरण मात्रै हो । वर्ष दिनको बजेटले सबैका इच्छा/आङ्काक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । विकासको दीर्घकालीन आधार स्तम्भ तयार पार्न हामीले पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । प्रदेश खाद्य संस्थानको स्थापना गर्ने, जडीबुटी प्रशोधन कारखाना खोल्ने, स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने, आगामी ३ वर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिभर बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । यसले प्रदेशको आधारशिला तयार पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा हामीले गरेका हौं ।
प्रदेश समृद्धिका मुख्य आधारहरू के–के हुन् ?
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार, जडीबुटी नै मुख्य आधारहरू हुन् । आर्थिक रूपमा यो प्रदेशलाई समृद्धिमा लैजान यी नै विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने मुहार फेर्न सकिन्छ । हिजोसम्म राज्यले हामीलाई केही पनि दिएन भन्ने थियो वा हेपाहा प्रवृत्ति भयो भन्ने थियो । अहिले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकृत भएर प्रदेशसम्म हकअधिकारहरू आइपुगेको अवस्थामा यहाँका सम्भावनाको उचित दोहन गरेर यहाँको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले काम शुरू गरेका छौं ।
प्रदेशवासीले विकासको अनुभूति गर्न नपाउँदै प्रदेश सरकारले करवृद्धि गर्नुको औचित्य के हो ?
हामी प्रदेशमा आएको धेरै समय भएको छैन । ६/७ महीना मात्रै भएको छ । यो अवधिमा जनताले अपेक्षा गरेजस्तो विकास हुन सक्दैन । कुनै पनि काम गर्न वित्तीय स्रोत तथा मानव संसाधन आवश्यक पर्छ । यति चाँडै कुनै जनताले विकास भएन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । तपाईंले उठाउनुभएको करको प्रसङ्गमा भन्ने हो भने सङ्घीयता भनेकै खर्चिलो व्यवस्था हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका जति पनि मुलुकहरूले सङ्घीयता अपनाएका छन्, सबै मुलुकमा त्यस्तै हुन्छ । जतिओटा सङ्घीय राज्य बनाउनु हुन्छ, त्यति नै खर्च बढ्छ । हिजो सिंहदरबारबाट निगरानी हुन्थ्यो अनि थोरै कर तिर्नुपर्ने लाग्थ्यो । अब घरदैलोबाटै निगरानी हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कर पनि लाग्छ, अनि करका दायरा पनि फराकिला हुन्छन् । सरकारी सेवाबापतको कर लाग्छ नै । हिजो काठमाडौं गएर सेवा लिँदा कति खर्चिलो हुन्थ्यो ? सरकारी सेवा घरदैलोमै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आएपछि त्यसलाई कर भन्न मिल्दैन । सहज र सर्वसुलभ रूपमा सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गरेबापतको शुल्क हो कर । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने म ठान्दिनँ ।
प्रदेश विकासको मुख्य बाधकचाहिँ के हो ?
विकास कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारले हामीसँग आवश्यक समन्वय गर्न सकेको छैन । जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरु अनगिन्ती रूपमा बढ्दै जानु, सङ्घीय सरकारले जुन प्रकारले हामीलाई आवश्यक संयन्त्रहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो त्यो नहुनु, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीचमा देखिएको आवश्यक समन्वयको अभावले हामीलाई विकासमा बाधा पु¥याइएको छ । सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले केही असहजता आएको छ । केन्द्रले साउन÷भदौसम्ममा आवश्यक समन्वय हुने भनिरहेकाले सायद अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश विकासको आधारलाई उचाइमा पुर्‍याउन के आवश्यक छ ?
पहिलो विषय त समयमा आवश्यक ऐनकानूनहरू नै ल्याउन सक्नु पर्‍यो । नेता, कार्यकर्ता सबैले आर्थिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन र संस्थागत अनुशासनमा बस्नु पर्‍यो । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्नु पर्‍यो । ऐन कानूनको परिधिमा रहेर अधिकार र कर्तव्यको खोजी गर्ने हो भने प्रदेश विकासको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ । हामी पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यासमा छौं । यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ । रचनात्मक सहयोग सबैबाट हुने हो भने मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । प्रदेश विकासको आधार तय गर्न सबैको भूमिका उत्तिकै आवश्यक रहेको मेरो बुझाइ छ ।
७ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि सार्वजनिक गरेको पूर्ण आकारको बजेट र अन्य प्रदेशहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटबीचको अन्तरसम्बन्ध के ?
बजेट सबैले आफ्नो लक्ष्यअनुरूप सार्वजनिक गरेको हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने सबैको एउटै लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । कुनै प्रदेशले कृषि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायत प्राथमिकता दिएको होला तर उद्देश्य सबैको समृद्धि नै हो । त्यसकारण हामीले प्राथमिकताको आधारमा बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । जनताको माग र आवश्यकता हेरेर हामीले यो प्रदेशको बजेट सबै ऐननियमहरूको परिधिमा टिकेर सार्वजनिक गरेका हौं । २५ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेर यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।
प्रदेश बस सञ्चालनको विषय बजेटमा उल्लेख गर्नु भएको छ । बसहरू कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ?
हामीले प्रदेश बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्दै छ । आगामी ६ महीनाभित्रै बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको मैले थाहा पाएको छु । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेकाले बसहरू ढिलोमा ६ महीनाभित्रै सञ्चालनमा आउने जानकारी मैले पाएको छु ।
प्रदेश आत्मनिर्भर बन्ने ठ्याक्कै कति समय लाग्छ होला ?
५ वर्षमा बन्न सकिने अवस्था छैन । एक कार्यकालमा प्रदेशले एकप्रकारको उचाइ हासिल त गर्छ नै तर पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन हामीले केही वर्ष अझै कठिन परिश्रम गर्नै पर्छ । मेरो परिकल्पना भनेको अबको १० वर्षमा आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले निकै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको पहिलो अर्थमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गरिरहँदा तपाईंको कार्यावधिसम्म प्रदेशवासीले मुख्यतया केचाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
सबैलाई शिक्षित बनाउने, स्वास्थ्य र स्वरोजगार, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, लगानीयोग्य वातावरण तयार गर्ने, मूलभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषयमा विशेष रूपमा म र मन्त्रालयले काम गरिरहेकाले त्यसको अनुभूति प्रदेशवासीले गर्नेछन् । अहिले हाम्रो मन्त्रालय नियमकानून र बजेटको अख्तियारी सम्बन्धमा दैनिक काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्रदेशको वार्षिक आम्दानी भनेको २५ अर्ब ६ करोड ८६ लाख १४ हजार छ भने खर्च पनि सोही हाराहारीमा छ । तर, हाम्रो आफ्नो वित्तीय स्रोत कुल खर्चको ६ प्रतिशत मात्रै हो ।